“Mourinho wuxuu heystaa wakhti uu ku saxo qaladaadka jira kahor kulanka PSG” _ Denis Irwin – Gool FM
(Europe) 17 Dis 2018. Halyayga kooxda Manchester United ee Denis Irwin ayaa xaqiijiyay in Jose Mourinho uu heysto waqti ku filan uu wax ku hagaajin karo, kahor kulanka Champions League ay ku wajahayaan Paris St Germain.
53 jirkan oo horey ugu soo ciyaaray kooxda Manchester United ayaa sheegay inuu rajeynayo in kooxdiisa horey ay gaarto qaab ciyaareedkeeda ugu fiican ka hor inta aysan wajihin Paris Saint-Germain.
Hadaba Denis Irwin ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay kadib isku aadka wareega 16-ka tartanka Champions League wuxuu ku sheegay:
“Manchester United waxay heysataa waqti ku filan, kahor kulanka lugta hore ay la ciyaari doonaan kooxda Paris St Germain wareega 16-ka ee tartanka Champions League”
“Waxaan rajeenayaa in Manchester United ay sameyn doonto hormar fiican inta ka dhiman xili ciyaareedkan”.
“Waxaan weli heysanaa labo bilood ka hor ciyaarta lugta hore ee PSG, qof walbana wuu ogyahay awoodda kooxda reer France, sidaasi darteed waa inaan u diyaargarownaa, waxay heystaan xidigo badan ee tayo wanaagsan leh, sida Kylian Mbappé, Neymar Jr, Angel de Maria iyo Edison Cavani”.
“Waxaan heysanaa khibrad fiican ee dhanka Champions League ah, waa inaan diirada saarnaa qaab ciyaareedkeena ugu fiican, weli waxaan heysanaa labo bilood ka hor kulanka PSG, sidoo kale waxaa muhiim ah inaan diirada saarno kulamada horyaalka”.